सानो सुकुमेलका यति ठुलो फाइदा, यी रोगीका लागि हुन्छ अत्यन्तै उपयोगी – Jagaran Nepal
सानो सुकुमेलका यति ठुलो फाइदा, यी रोगीका लागि हुन्छ अत्यन्तै उपयोगी
काठमाडौँ । सुकुमेल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसले ग्यास्ट्रिकबाट रक्षा गर्छ, कोलेस्टेरोल तथा क्यान्सर नियन्त्रण गर्छ, मुटुसम्बन्धी समस्याबाट राहत दिन्छ र रक्तसन्चारमा सुधार गर्छ ।
यसका साथै यो दाँतसम्बन्धी रोग र मुत्रनली संक्रमणजस्तै सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस र गोनोरियाको उपचारका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ ।
कहाँ पाइन्छ सुकुमेल ?
यो खासगरी भारत, नेपाल र भुटानको प्रमुख मसला मानिन्छ । भारत, चीन, भुटान, भियतनाम, मलेसिया, कोरिया र जापानका उष्ण क्षेत्रमा पाइन्छ । यसलाई मसलाको रानी भनिन्छ, जो मुल्यका हिसाबले तेस्रो महंगो मसला मानिन्छ ।
१ सय ग्राम सुकुमेलमा इनर्जी ३ सय क्यालोरी, कार्बोहाइड्रेट छ८ ग्राम, प्रोटिन ११ ग्राम, फाइबर २८ ग्राम पाइन्छ भने कोलेस्टेरोलको मात्रा शुन्य हुन्छ । यो भिटामिन र सुक्ष्मपोषक तत्वले भरपुर हुन्छ । यसमा नियासिन, पाइरिडोक्सिन, रिवोफ्लाभिन, थियामाइन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, कपर, आइरन, म्यांगनिज, म्याग्नेसियम, फोस्फोरस र जिंक पाइन्छ ।
अधिक खाना पनि हानिकारक छ स्वास्थको लागी लाभदायी छ भनेर सुकुमेल धेरै खानुहुन्छ भने यो पनि तपाईँको लागि राम्रो हुने छैन। सुकुमेल दुई प्रकारको हुन्छ। अर्थात ठूलो र सानो र दुई वटा नै मसालाको रूप मा प्रयोग गरिन्छ। तर ध्यान राख्नुहोस् सुकुमेलको अत्यधिक उपभोग गर्नाले तपाईँलाई नोक्सान पनि पुर्‍याउँछ। त्यसैले हरेक दिन दुई देखी तीन ओटासम्म सुकुमेल सेवन गर्नु तपाईँको लागि लाभदायी हुनेछ।
मुटुको धड्कनमा सुधार
आजकल मुटुको रोग सामान्य भएको छ। प्रायः मानिसहरूको मुटुको धड्कन कम हुन्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ मुटुको धड्कनलाई सही राख्नको लागी सानो सुकुमेल निकै प्रभावकारी छ। सुकुमेलमा पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । मानवको रक्त, शरीरमा पाइने तरल पदार्थ र टिसयुजको मुख्य तत्व पोटासियम हो। सुकुमेलमा पोटासियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ।
फोक्सोको समस्यालाई हटाउछ
सुकुमेलले फोक्सोमा रक्त संचालनको गतिलाई बढाउँछ। यसले स्वासको समस्या जस्तै चिसो र खोकीबाट राहत प्रदान गर्दछ। आयुर्वेदमा सुकुमेलको परिणाम गर्मी मानिएको छ। जसले शरीरको लागि गर्मी दिन्छ। त्यसकारण यसको सेवन गर्नाले तपाईँको शरीरमा कम भन्दा कम चिसोको असर हुन्छ।
सुकुमेलको सेवन गर्नाले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी हुन्छ। मानव शरीरमा धेरैजसो रोगले उच्च रक्तचापको कारण जन्म लिन्छ। यदि तपाई पनि प्रतिदिन दुईदेखि तीनवटासम्म सुकुमेलको सेवन गर्नु हुन्छ भने तपाइ रक्तचापबाट मुक्त हुनुहुन्छ।
मुखको गन्ध हटाउनुहोस्
सुकुमेलले स्वाद बढाउनुका साथै माउथ फ्रेश्नरको काम पनि गर्छ। यसको सेवन गर्नाले मुखको गन्धमा सुधार आउछ। यदि तपाईँको मुख धेरै गनाउँछ र मान्छेहरू तपाइको छेउमा पर्न हिचकिचाउँछन् भने हर समय एउटा सुकुमेल मुखमा राख्न सक्नुहुन्छ।
पेटमा कब्जियत यानी बिरामीको निम्तो। त्यसैले सबैले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् कि कब्जियतको समस्या नहोस्। यदि तपाई कब्जियतबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सुकुमेल पकाएको पानी पिउनाले तपाईँलाई फाइदा गर्छ। यसले तपाईँको पाचन क्रियालाई सही बनाएर कब्जियतबाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ।
वैवाहिक जीवनलाई सुखी बनाउनुहोस्
शायद तपाईँलाई पनि थाहा छ होला सुकुमेलको सेवन गर्नाले तपाइको सेक्स लाइफ अर्थात् यौन जीवनलाई पनि राम्रो हुन्छ। प्रत्येक दिन सुकुमेलको प्रयोग गर्नाले तपाईँको यौन जीवन सही रहन्छ र तपाईँको जिवन साथी पनि सधैँ खुशी हुन्छिन्। नपुंसकतामा पनि सुकुमेलको प्रयोग गर्नु फाइदा हुन्छ।
उल्टी हुने समस्यामा राहत
तपाईँलाई केही किलोमिटर यात्रा गर्दा उल्टी हुने समस्या छ भने यात्रा शुरु गर्नुभन्दा पहिला सुकुमेलको प्रयोगले यस समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईँलाई यात्रामा सबै समय उल्टीको समस्या हुन सक्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईले सम्पूर्ण समय सुकमेललाई मुखमा राख्न सक्नु हुन्छ।
घाँटी दुख्ने हटाउनुहोस्
यदि मौसम परिवर्तन वा सामान्य दिनहरुमा पनि घाँटी दुख्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सुकुमेलको प्रयोग गर्नुहोस्। यसले दुखाइबाट राहत दिन्छ।
सुकुमेल खाँदा के–के हुन्छ​ फाइदा ?
– सास गनाउने गरेको छ भने मुखमा सुकुमेल हाली समय लगाए चुस्ने गर्नुस् । यसमा पाइने सुगन्धले सासलाई ताजा राखी दुर्गन्ध हटाउँछ ।
– भोक नलाग्ने, बान्ता हुने, अपच हुने आदि समस्या छन् भने सुकुमेल खानाले कम हुन्छ ।
– तिर्खा लागिरहन्छ अथवा घाँटी पोल्ने गरिरहन्छ भने सुकुमेल मिसाइएको पानी पिउँदा राम्रो हुन्छ ।
– छातीमा कफ जमेको छ र सास लिन गाह्रो भइरहेको छ भने सुकुमेल खानाले कफ बाहिर निस्कन्छ र शरीरलाई राहत मिल्छ ।
– रुघाखोकी लागेको छ अथवा घाँटी खसखस भइरहने समस्या छ भने सुकुमेललाई पिसेर महसँग खानुपर्छ ।
– ज्वरो आएर जीउ पोलेको छ भने सुकुमेल खानाले सहज महसुस हुन्छ ।
– सुक्खा खोकी लागेको छ भने सुकुमेल, तोरीको तेल र चिनी मिसाएर खानुपर्छ । यसले कफ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
श्रीमानलाई कोरोना देखियो भन्ने लगत्तै श्रीमतीलाई हृदयघातले लग्यो त्यसपछि २४ घण्टा नबित्दै श्रीमानको पनि मृत्यु
जब मलाई मेरो पति समलिङ्गी भएको थाहा भयो !
दिल्लीमा जस्तै काठमाडौमा को’ठी [ अण्डरग्राउण्ड रिपोर्ट ]
सावधान ! यस्ता गल्तीले गुम्नसक्छ तपाईको श्रवणशक्ति
कुनबार के चीज नखानु राम्रो मानिन्छ ?
आज मंसिर २० गते शुनिबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल